Jawaab: waxaan doonayaa in aan ku waydiiyo saddex su'aalood
Assalaamu calaykum: walaal jawaabihii su'aalahaagu waa sidan:
Qaybta 1aad: Lacagta Ribada ah
Midda hore ee aad tiri: Bangiga lacagta aan dhigto dulsaarkeeda ma qaadan karaa? Culumadu lacagta noocaas ah ee ku timaada mucaamalada ribada ah ama khamaarka iwm saddex qaybood ayay u qaybsheen:
A. Mucaamalo muslim iyo muslim ka dhaxaysa, waxayna isku raaceen in ay xaaraan tahay, oo aanay bannaanayn in laba qof oo muslim ah ribo ku kala qaataan xoolo ama qamaar ku kala qaataan xoolo, ama ha joogeen dhulka muslimiinta ama ha joogeen dhulka gaalada.
B. Mucaamalo Gaal iyo muslim u dhaxaysa ayada oo la joogo dhulka muslimiinta, taasna culumadu waxay isku raaceen in ay xaaraan tahay, oo aanay bannaanayn in qaab ribo ah ama qamaar ah qof gaal ah xoolihiis lagu qaato haddii gaalkaas joogo dhulka muslimiinta oo uu halkaas ku noolyahay.
C. Mucaamalo u dhaxaysa, muslim iyo gaal ayada oo la joogo dhulka gaalada, mas'aladan culumada qaar way diideen qaarna way banneeyeen, waxayna dhaheen, haddii qof muslim ah uu joogo dhulka gaalada oo uu ribo ama qamaar xoolo uga qaato gaalada asiga oo aan khiyaamin, xoolahaasi waa u xalaal.
Goormay Ribada iyo Khamaarku xalaal noqonayaan
Marka walaal sida kaaga muuqata hadalka culumada, mad-habta xanafiyadu waxay qabtaa in ay xalaal yihiin xoolaha uu qofka muslimka ah ribo ama khamaar uga qaato gaalada asiga oo jooga dalka gaalada, laakiin waxay diideen in la khayaamo ama la dhagro gaalada, oo ma bannaana in xoolaha gaalada khiyaamo ama dhagar lagu qaato.
Sidaa darteed, lacagta dulsaarka ah ee aad sheegtay, haddii aad dhigatay banki gaalo leedahay oo ku yaalla wadan gaalo oo aad halkaan joogto kuna nooshahay, oo lacag dulsaar ah laguu saaro lacagtaadii, dulsaarkaasi waa xalaal sida uu qabo Imaam Abuu Xaniifa allaha ka raalli noqdee.
Faahfaahin: haddii aad u baahato ka fiiri kitaabka (al-Mabsuud ee uu qoray al-callaamah al-Sarakhsi, mujalladka 14aad, baalka 56aad). Sidoo kale fiiri: (Durr al- Muxtaar calaa addur al-Mukhtaar, juzka 3aad, baalka 249. Sidoo kale fiiri (al-Insaaf fi Macrifati ar-Raajixi minal Khilaaf, juska 5aad, baalka 52) sidoo kale fiiri, (al-Xaafid az-Zaylici, Nasbu ar-Raayah, juzka 4aad, baalka 52). Dhammaantood waxay caddeeyeen in Imaam Abuu Xaniifa iyo Muxamad Bin Xasan al-Shaybaani labaduba banneeyeen in gaalka ribo laga qadan karo khamaarna xoolo looga qaadan karo, xoolo mayto ahna laga iibin karo haddii uu joogo dalkiisa oo uusan joogin dalka muslimiinta. Waxayna Soo daliilsadeen Xadiiska Makxuul laga soo weriyay, iyo qisadii Abuubakar ee ku timiday aayadda ar-Ruum 1-3, iyo akhabaar kale oo dhammaantood caddaynaya mas'aladan.
Qaybta 2aad: Nikaaxa Mutcada ah
Walaal Nikaaxa mutcada ah culumada ahlusunnada ah oo dhan waxay isku raacsanyihiin in uu xaaraan yahay, nikaaxaas markii hore Nabigu nnk wuu banneeyay, kadibna waa la joojiyay, kadibna waa la banneeyay, ugu dambaystiina waa la joojiyay, sidaa ayaana culumadu dhammaantood fatwoodeen.
Wahhaabiyada iyo Shiicada ayaa Mutcada bannaysay
Mad-habta Shiicada ayaa bannaysay mutcada, sidoo kale waxaa banneeyay Firqada Wahhaabiyada, laakiin labada kooxood waxaa u dhexeeya, in wahhaabiyadu shardi uga dhigayso in aanan gabadha loo sheegin waqtiga uu ninku damacsanyahay in uu furo, oo ninku qalbigiisa ku haysto.
Macnaha naagta wuu guursanayaa asiga oo niyada ku haysta in uu berri iska furo, laakiin u sheegi maayo ayada oo wuxuu ku leeyahay waan ku guursanayaa oo kaliya.
Nikaaxa noocaas ah waxaa xalaaleeyay Ibn Baaz oo ahaa Wahaabiyada Muftigooda, wuxuu ku xusay mujalladka afaraad ee fataawihiisa.
Marka walaal labadaas kooxood wixii aan ahayn muslimiinta intooda kale ee ahlusunnada ah waxay raaceen sunnadii nabiga nnk iyo amarkiisii, waxayna dheheen mutcadu waa xaaraan, mana bannaana.
Qaybta 3aad: Guurka aanan waalidka laga idan qaadan
Haddii naagtu gabar yar tahay oo aanay horey u guursan, waa in waalidka laga idan qaato haddii ay joogaan, ama waligeedii haddii uu joogo, haddii aanan waligii joogin qaalliga ayaa kugu mehrinaya gabadha.
Haddii ay gabadh wayn oo wax baratay tahay, ama naag hadda kahor soo guursatay tahay, oo aanan waligeedii joogin, ayada ayaa qof wakiilanaysa ama shiikha wakiilanaysa ama qaalliga wakiilanaysa ayada ayaana gaaraysa go'aanka guurkeeda, xataa haddii waalidkeed joogo xaq uma laha in ay mehriyaan ayada oo aan ogayn ama raalli ka ahayn.
Sh. Dr. Hersi Aw Mohamed <ahlusunnah_waljamah@2garre.com>
- Monday, February 06, 2006 at 17:08:25 (CST)
Su'aal: waxaan doonayaa in aan ku waydiiyo saddex su'aalood
A/w dr/shiekh waxaan jeclahay inaan ku waydiiyo 3 su aalood oo diini ah waaxa ay kala yihiin sidaan:
1. Hadaan dhigto lacag bangi oo ay sanad kasta kusiyaado haafkeed diinta islaamka ma xaaraan tinimaynaysaa mise waa caadi oo waan dhigan karaa?
2.Hadaan guursado gabar ah shiico aan doonayo inaan haysto mudo cayoman sida ay qabto diinta ama mad-habta shiicada masamaynkaraa sidaas mise waa xaaraan?
3. Hadaan gabar aan wada sheekaysano oo aan ku heshiino inaan is kuguursano waalid keedna ay ku maqan yihiin dal aad u fag amaba uu joogo idinla aan ma is mahersan kartaan gabadhaas mise waa maya? wabilaahi towfiiq.
Omar A Hashi <mrhashi11>
- Monday, February 06, 2006 at 16:43:54 (CST)
Jawaab: Been qofkii ku dhaarta ciqaabtiisu maxay tahay?
Assalaamu Calaykum: walaal, qofkii been ku dhaarta wuxuu falay dambi weyn oo falkaasi wuxuu ka mid yahay "kabaa'irta", marka waxaa ku waajib ah qofkaas in uu si degdeg ah u toobadkeeno.
Midda labaad beenta sheegiddeedu waa afar jaad:
1. Beenta laga sheego Eebbe iyo Nabigiisa: Beentaas waa "kufri" haddii qofku asiga oo uu Alle iyo Nabigiisa ku been abuurto.
2. Beenta dhibaato ka soo gaarayso dadka, sida qofkii been qof kale u sheega ee dhibaato kaga timaado beentaas, beenta noocaas ah waxay ka mid tahay "kabaa'irta" qofkii falana waa in uu ka toobad keeno si degdeg ah.
3. Been aanan dhibaado dadka uga imaanayn, oo uu qofku isaga hadlo, taasina waa dambiyada yaryar, oo "saqaa'uirta ah" ayada qofku waa in uu ka toobad keeno waana in uusan caado ka dhigan sheegidda beenta yaryar.
4. Beenta bannaan ee "Jaa'iska ah" waana saddex qaybood:
a. Beenta ninku naagtiisa u sheegayo si uu u raalli gelsho ama naagtu u sheegayso ninkeeda si ay u raalligeliso. b. Beenta uu qofka muslimka ah sheegayo si uu u heshiisiiyo laba muslim oo dagaashan. c. Beenta dagaalka uu ka sheegayo qofka muslimka ah si muslimiintu dagaalka ugu guulaystaan.
Afartaas qaybood ayaa culumadu sheegeen, mid kastana xukun ayay u yeeleen, marka sidaa u kala faham walaal. khayr baan kuu rejaynayaa.
- Sunday, February 05, 2006 at 19:54:07 (CST)
Su'aal: Been qofkii ku dhaarta ciqaabtiisu maxay tahay?
asc/wrwb/shikhow marka hore iga gudoon salaan 114 quraanka cadadiisa ay dhantahay, salaan ka dib shiikhow waxaan ku waydiinayaa:
Been ninkii ku dhaarta dambigiisa ma ween yahay? tan 2aad beenta mar ay banaantahay ma jirtaa, waase goormee? ii soo sheek iina soo jabaab jazaukalaahu khayral jazaa. asc wr wb.
- Sunday, February 05, 2006 at 17:37:17 (CST)
Jawaab: Attaxyaadka haddii aan dhameeyo, ma iska aamusi karaa, si aan imaamka u sugo?
Assalaamu calaykum, walaal haddii aad attaxyaadka dhamayso oo imaamkii wali ku jiro attaxyaadka waxaad akhrisan kartaa wixii duco ah ee aad doonayso in aad akhriso, haddii aadan duco aad akhriso aqoon iska aamus oo sug imaamka inta uu ka dhamaynayo oo ka salaama naqsanayo.
- Sunday, February 05, 2006 at 03:23:15 (CST)
Su'aal: Attaxyaadka haddii aan dhameeyo, ma iska aamusi karaa, si aan imaamka u sugo?
asc/wr wb shikhow iga gudoon salaan ay ka so goday in tiiba islaam ah, shikhow waxaan rabaa in aan ku waaydiiyo khayr alaha ku siiyee in taad ii faaidaysay, masjidka salaadda lagu jiro haddii aan ku gaaro ka dibna ataxyaadka loo fariisto dadaka dhan ataxyaadka wada aqrinayaan imaamkana ataxyaadka uu dheereyo anigana ataxyaad dheer aan aqoonin, ma iska aamusnadaa maxaan sameeyaa ilaa imaamka ka salama noqsanaya? ii soo jabaab asc/wrwb.
- Sunday, February 05, 2006 at 03:21:04 (CST)
RE: Salaan iyo Xiriir: Shiikh waxaan joogaa Newzealand magaalada wellington..
Assalaamu calaykum: Walaalayaal Abdirashiid iyo jamaacadiisa, waad mahadsantihiin, waana idinku soo dhawaynayaa bogga ahlusunnah wal-jamaacah, waana xiriiri doonnaa inshaa allaah.
- Sunday, February 05, 2006 at 03:08:09 (CST)
Salaan iyo Xiriir: Shiikh waxaan joogaa Newzealand magaalada wellington..
Assalaamu calaykum: waan ku salaamay shiikh, waad mahadsantahay sida wanaagasan aad dadka diinta ugu sheegtit, ilaahay hakaa ajirsiiyo adduun iyo aaqiro.
Shiikh waxaan joogaa Newzealand magaalada wellington dariiqada qaadiriyo xarta rabiiciyo, waaxaan kaa rabaa wexii talo ah, inaad emailka keyga iigu soo dirtit, waxaan rabnaa inaan kula sooxariino.
- Sunday, February 05, 2006 at 03:06:00 (CST)
Su'aal: Qofkii diinta caaya ma muslim baa?
Assalaamu calaykum: Walaal qofkii diinta caaya ama ku jeesjeesa ama Ilaahay caaya, ama ku jeesjeesa, ama Nabiga caaya ama ku jeesjeesa, waa gaal, haddii uu muslim ahaana waa murtad, waxaana ku waajib ah in uu diinka degdeg ugu soo laabto asiga oo ashahaadanaya, daliilna waxaa u ah aayadda 65-66aad ee suuradda at-towbah ee uu Eebbe ku yiri: (Waxaad ku dhahdaa, ma Eebbe iyo aayadihiisa iyo Rasuulkiisa ayaad ku jeesjeesaydeen. Ha cudur daarana waad kufriseene.."
- Sunday, February 05, 2006 at 03:01:44 (CST)
Assalaamu calaykum, Shiikh, qofka caaya diintu waa muslim ma odhan karnaa?
aidarus ahmad < shinbir48>
- Sunday, February 05, 2006 at 02:52:38 (CST)
Jawaab: Naagtaydu haddii ay deriska dhibayso, naseexana yeelayn..
Assalaamu calaykum: walaal, naagtaadu haddii ay deriska dhibayso naseexana kaa yeelayn, deriskuna kaaga soo dacwoonayo, waa dhibaato, waxaanna kugula talinayaa amuuraha soo socda:
1. In aad diinka wax ka bartid oo aad u dulqaadatid, haddii aadan adigu bari karin qof baraya oo guriga ugu imaanaya u raadi.
2. Haddii ay diinka wax ka barato salaadda in ay tukato ku guubaabi, Ilaahayna ku cabsii oo Ilaahay ka cabso ku dheh, macallinka diinka barayana u sheeg in uu wacdiyo.
3. Adiga waxaa lagaa rabaa in aad sabartid oo dulqaad labanlaab ah la timaadid, oo aadan marnaba ku xanaaqin siiba haddii ay carruur kuu hayso.
4. Deriskaaga la hadal oo u sheeg in xaaskaagu xanaaq badantahay oo aad adiguna u sabraysid, ayaga waydiiso in ay u sabraan oo ku caawiyaan sidii aad haweenaydaada u toosin lahayd.
Marka walaal waxa ugu muhiimsan ee loo baahanyahay haweenka waa diinka, badanaa waxaa dhaca nimanku in ay arrinkaas iska dhega tiraan, oo haweenkii aan diinka la barin, taasina waxay keenaysaa in ay haweenkii faraha ka baxaan oo ay ninkeeda isxtiraami diiddo, maxaa yeelay ma taqaan xuquuqda uu ninku leeyahay iyo kuwa ay leedahay, inkasta oo ay Islaam ismoodayso oo ninka sharci islaam ku qabto, hadana islaamkii lama barin, marka dambigaas waxaa leh nimanka, ama naagta ninkeeda ama aabaheed iyo ciddii soo korisay oo soo tarbiyaysay.
- Thursday, February 02, 2006 at 23:40:32 (CST)
Su'aal: Naagtaydu haddii ay deriska dhibayso oo aanay naseexada yeelayn, maxaan ku sameeyaa?
asc/wr wb shiikhow iga raali ahaaw, waxaan ku waydiinayaa: nagtayda hadii dariska dhibayso, laakiin anigana aan dhib ku qawin, lakiin qof walba igaaga soo araaranaayo, anigana see wax aan yeelaa! inaan furana ma jacli naagtayda, hadalna igama maqlayso! shiikow iga soo gaar!
omar sha <kooshan1>
- Thursday, February 02, 2006 at 23:32:18 (CST)
Jawaab: Tiishuuga musqulaha ma lagu astajoon karaa?
Assalaamu calaykum: Walaal, tiishuuga ama maryaha cad ee waraaqaha khafiifkaa ah ee musqulaha loo adeegsado xukunkoodu waa xukunka dhagaxda iyo qoryaha, sidaa darteed, qofkii ku astajooda way ka ansaxaysaa haddii uu sidii loo baahnaa u adeegsado.
Waraaqahaas tiishuuga ah waa xaashi laga sameeyay qoray ama alwaax ama xaashiyo kale oo dib loo adeegsaday, marka way bannaantahay in algu astajoodo dabadeedna la waysaqaato oo la tukado waxba kuma jabna inshaa allaah.
Haddii waraaqahaas laga sameeyay wax asalkoodu najaas ahaa, ama aan daahir ahayn, oo aad hubsato in wixii laga sameeyay ay najaas ahaayeen, markaa ma ansaxayso in lagu dahaaro qaato. Khayr baan kuu rejaynayaa.
- Wednesday, February 01, 2006 at 07:27:21 (CST)
Su'aal: Tiishuuga musqulaha ma lagu astajoon karaa?
waan ku salamayaa wallaal shiikh, waxaan ku su'aalahayaa tiishuuga musqulaha ma lagu istijoon karaa oo ma lagu tukan karaa? wahhaabiyadu waxey leeyihiin wey banaantahay.
- Wednesday, February 01, 2006 at 07:22:50 (CST)
Jawaab: Naagtu ninkeeda lacag uusan ogolayn jeebkiisa ma kala bixi kartaa?
Assalaamu calaykum: Walaal naagtaada haddii aad biilka guriga siisay oo uu biilkaas ku filanyahay, hadba sida naagaha asaaggeeda ah ay biishaan, haddii aad bixisay biilkaas, naagtaas xaq uma laha in ay jeebkaaga lacag aadan ogolayn kaa qaaddo, haddii ay qaadatana waa xaaraan.
Midda labaad, haddii aad doonayso in aad furto, way kuu bannaantahay wax dambi ahna kaa soo gaari mayaan, maadaama aanay maqlayn naseexada, oo aanay ka reebtoomayn xumaanta ay ku kacayso oo ah maqal la'aanta iyo xoolaha aan loo fasixin ee ay qaadanayso, haddii aad furto waxba kaa soo gaari mayaan.
Marka walaal, haddii aad doonto in aad furto waa in aad furtaa ayada oo daahir ah oo furriinkaagu ha ahaado furriin sunno ah, kaas oo ah in naagta la furo ayada oo daahir ah oo aanan loo tegin kadib markii ay ka qabaysatay caadada.
- Tuesday, January 31, 2006 at 23:36:37 (CST)
Su'aal: Naagtu ninkeeda lacag uusan ogolayn jeebkiisa ma kala bixi kartaa?
asc/wr wb shiikhow adoo raali ah ilaahayna raali haka noqdee, su'aal aan ku wareeray ayaan rabaa in ana ku waaydiiyo raalina iga ahaaw, su'aasheeda waxay tahay:
Naagtayda hadii jeebkayga lacag kala baxdo aan biilkeedana aan ahayn, hadii aan dhahana lacag jebkayga hakala bixin, biilkaaga aan wax dhimneen marwalba waan ku siiyaa, jeebkayga lacagta aan ogayn dheeradaka aad kala baxaysid kuuma ogoli, ayadana ay igu sii wado mar walba waanadeedana aan ka daalay, hadaan furo ma dambi baa iga soo gaaraya?
Jawaab inshalaah, waan yaabanahaye saan wax yeelo ayaan la ahayee tuug koreed miyaan is ka ilaashaa mise xaaskayga ayaan is ka ilaashaa! shiikhow iga soo gaar plzzzzzzz asc/.
omar shariif <sharma_arke>
- Tuesday, January 31, 2006 at 23:31:43 (CST)
Jawaab: Gabadha aabaheed khasab ma ku mehrin karaa?
Asalaamu caleykum: Walaal Hibo, gabadha aabaheed khasab wuu ku mehrin karaa, laakiin shuruudo ayaa u yaalla arrinkaas, waana sida soo socota:
1. Shardiga koobaad waa in uusan khilaaf dhex oollin aabaha iyo gabadha, tusaale ahaan, haddii gabadha iyo aabuhu isku haystaan khilaaf xagga xoolaha ah. Gabahd ayaa hooyadeed dhimatay oo xoolo uga tagtay, aabihii si uu xoolaha gabadha uga qaato haddii uu doono in khasab nin ugu daro, taas sharcigu ma ogola.
Marka haddii gabadha iyo aabaha khilaaf ka dhaxeeyo oo khilaafkaas ku tacaluqo xaq ay gabadhu leedahay, aabaha uma bannaana in uu gabadha khasab ku mehriyo.
2. Qodobka labaad waa in aabuhu gabadha ku mehriyo nin u qalma, xagga diinka iyo xagga nasabka iyo xagga shaqada, haddii aabaheed ahaa taajir oo uu doono in uu ku khasbo nin kabatole ah, ama aabaheed uu ahaa nin gob ah oo sharf leh sida haddii uu ahaa wasiir ama madaxwayne ama boqor ama safiir iwm, ee uu doono in uu ku khasbo qof ka hoosayda oo xamaali ah ama aabihiis tagsi wado iwm, taas aabuhu xaq uma laha, nikaaxiisuna ansixi maayo haddii aanan gabadhu waafaqin.
Haddii uu ku khasbo in uu ku mehriyo nin aanan salaadda tukanayn ama aanan jamaacada jimcada tukanayn ama khamriga cabaya nikaaxaas ansixi maayo haddii aanan gabadhu waafiqin.
Marka labadaas shardi waa in uu ka soo baxo aabuhu inta uusan gabadhiisa khasbin.
Marka haddii aan soo koobo warka, culumadu waxay dhaheen, haddii gabadhu bigro tahay oo aanay garoob ahayn, oo ninka uu ku merinayo nin u dhigma yahay gabadha dhinaca diinka iyo dhinaca nasabka iyo dhinaca mihnada (shaqada), oo aanan aabaha iyo gabadha khilaaf ka dhaxay, aabuhu wauxuu xaq u leeyahay in uu ku mehriyo gabadha ninkii shuruudahaas buuxsha haddii ay xataa gabadhu diiddo.
Sikastaba ha ahaatee, waxaa wanaagsan in aabuhu gabadha ku qanciyo in waxan uu samaynayo ay maslaxadeeda yihiin, oo ninkan uu ku khasbayaa uu yahay nin uu soo tijaabshay oo hubsaday in uu gabadha dhaqi doono dhaqaalayna doono. Sidaas ayaa habboon, mana haboona in la khasbo gabdhaha oo lagu dirqiyo dad aanay doonayn ama jeclayn. Khayr baan kuu rejaynayaa.
- Tuesday, January 31, 2006 at 23:26:30 (CST)
Su'aal: Gabadha aabaheed khasab ma ku mehrin karaa?
Asalaamu caleykum wr wb: shiikhow adiga oo mahadsan ayaan rabaa in aan su'aal ku weydiiyo, su'ashas oo ah. Ma mehersameysaa Gabar aabaheed mehriyey weliba iyada oo aan raali ka ahayn oo ay diidey ka dibna uu mehriyey, maxay ka qabtaa diintu meherka noocaas ah? Jazaklaah Qeyr shiikhow .
- Tuesday, January 31, 2006 at 22:54:04 (CST)
Jawaab: Midabka naaguhu is mariyaan ma bannaanyahay?
Assalaamu calaykum: walaal salma haweenayda waxaa u bannaan in ay is mariso wax kasta oo ay ku qurxoonaanayso ama midab ha ahaadeen ama barafuun ha ahaadeen, ama ilkaha oo qorato ha ahaadeen ama dahab ay dhegaha gashato iyo sanka ha ahaadeene.
Marka qaacidada guud waa in haweenka islaamku u banneeyay in ay sameyaan wax kasta oo laysku qurxunayo, islaamku wuu u banneeyay waxyaabahaas oo dhan.
Marka midabka cidiyaha la marsanayo iyo midka korka la marsanayo iyo midka timaha la marsanayo dhammaan waxba kuma jabna wuu bannaanyahay, diintana wax daliil ah oo diidaya kuma soo aroorin. Khayr baan kuu rejaynayaa.
Sh. Dr. Hersi Aw Mohamed <ahlusunnah_waljamah@2garre.com >
- Tuesday, January 31, 2006 at 16:36:37 (CST)
Su'aal: Midabka naaguhu is mariyaan ma bannaanyahay?
Assalaamu calaykum: marka hore shiikhow iga gudoon salaan alle xageeda ah, salaan ka bacdi waxaan rabaa in aan ku waaydiiyo - raalina iga ahaaw - kalarka lamarsanayo madaxa maxuu dhib ah oo leyahay iyo madoobeysada cijiyaha lamar sanayo iiga soo jawaab shiqow iyo sanka oo la durto oo dahab la geliyo maxay ka qabtaa diinta shiikhow . jzkl qeyr .
salma yoonis <salma>
- Tuesday, January 31, 2006 at 16:32:18 (CST)
Jawaab: Mala guursan karaa naag kirishtaan ah?
Assalaamu calaykum, walaal naagta aad sheegtay haddii ay diiddo in aad diinta islaamka ku guursato waxaan kugula talinayaa in aad ka tagto oo iska dhaafto, waxaad helaysaa kuwa ogol in aad islaamka ku guursato oo muslim ah ama kirishtaan ah.
Marka walaal ma bannaana in naag sharci aan sharci islaam ahayn lagu guursado, ninkii sidaa yeelay ee naagtaa u tagana waa nin sinaystay ee kaas islaaamku guur uma aqoonsana.
Haddii ay naagtu doonayso in ay caqiidadeeda kitishtaanka haysato waxba kuma jabna, haddii ay doonayso in ay u dabbaal degto feestooyinkooda oo haysato dhaqankooda waxba kuma jabna, laakiin sharciga aad ku guursanayso waa in uu mid islaam ahaado. Khayr baan kuu rejaynayaa.
- Tuesday, January 31, 2006 at 16:29:01 (CST)
Su'aal: Mala guursan karaa naag kishtan ah?
salaamu caleykum: Naag kirstaan ah ayaa igu xujeeysay inan ku guursado marka hore diinteeda kiristaanka ah, kadibna musilm, laakin wakhti oow udhexeeyo labaadaas guur. waad mahad santihiin.
fiidow ahmad <jiniqow>
- Tuesday, January 31, 2006 at 16:23:56 (CST)
Jawaab: Qof Nabiga nnk difaacaya gaal ma noqon karaa?
Assalaamu Calaykum, walaal islaamnimadu ma aha nabiga difaaciddiisa, Islaamku waa caqiido, haddii aadan caqiidadaas oo saxan haysan Islaam ma ihid, ama nabiga nnk difaac ama ha difaacin taasi shaqo kuma laha, daliilna waxaa u ah, Nabiga Adeerkiis Abuu Daalib, oo ahaa ninkii Nabiga ka difaaci jiray gaaladii Quraysh, wuxuu Abuu Daalib ku dhintay gaalnimo, maxaa yeelay caqiidadii toosnayd in uu qabsado ayuu diiday.
Marka koox wahhaabiyo ah oo istustus nabiga u difaacaya haddii aad u malaysay in ay Islaamkii xaqa ahaa ku taaganyihiin, barabagaandhe ma aha Islaamku ee waa Cilmi aqoon ku salaysan, Sacuudiguna caqiidada ma matalo mana keenin ee Caqiidada Ilaahay ayaa u soo dejiyay caalamiinta, carabna u gaar ma aha.
In Islaamku diin Carbeed yahay Yahuudda iyo Nasaarada ayaa ku andacoon jiray
Hadalka wahhaabiyadu waa hadalkii Yahuudda iyo kii Nasaarada, meel kasta oo aad ka eegto wahhaabiyada waxay ku xusuusinayaan Nasaaro iyo Yahuud, subxaana laah, bal u fiirsada, waxay doonayaan in ay diinta ka dhigaan dhaqan carbeed, oo ay ka dhigaan diin carab kaliya u gaar ah oo aanan dadka kale shaqo ku lahayn.
Culumada Diinta qoray carab uma badnayn ee waxay ahaayeen cajam
Hadaba qofkii aanan wax aqoon waxaa la gudboon in uu waxbarto, sida taariikhda Islaamka ku cad, oo kutubta Islaamka ku cad, magacyada culumada qoray diinta Islaamka badankoodu waa dad aan carab ahayn, Bukhaari, Muslim, Abuu Xaniifa, Shiiraasi, Saylici, al-Qurdubi, ad-Dabari, qofkii aad doonto soo magacow, wax yar ayaa culumada carab ahaa, taasna waxay daliil u tahay in Ilaahay uu diinkan khalqiga oo dhan u soo dejiyay, marka wahhaabiyo haddii ay maanta damacday in ay diinka dhaqan carbeed u beddesho taasi waa mid aan ahaanayn ee ku bishaaraysta.
Nabiga Mustashriqiinta ayaa difaacay
Waxaa ka mid ah Mustashriqiinta difaacay ee ammaanay Nabiga nnk Mecheal Heart ninkii qoray kitaabkii "Boqolkii qof ee adduunka ugu sarreeyay" oo ku qoray Muxamad ninka 1aad, marka ma waxaad leedahay wuxuu ahaa Muslim? Subxaana laahi, Ilaahow Cilmiga nuurkiisa na tus.
Tacasubka Indha la'aanta ah iska daaya walaal
Marka Ilaahay ka baqa walaalayaal, tacasubku waa shay aad u xun, Ilaahay wuxuu yiri "Nacayb aad qoon u qabtaan dartiis xaqa ha uga leexana" aayadda macnaheedu waa sidaas, marka qofka muslimka ah waxaa la gudboon in uu cilmiga nuurkiisa raaco, oo xaqa ku dhego, oo xigmadda qabsado, tacasubka iyo nifaaqa iyo jahliga iyo dhammaan sifooyinkaas xunna uu ka tago.
Marka qofka u malaynaya in islaannimaduba tahay nabiga difaaciddiisa oo cilmigiisuba intaas la egyahay, ma bannaana in uu ijtihaado oo uu fatwoodo oo uu culumada reddiyo, ee waxaa la quman in uu wax barto marka hore, oo kutubta billowga ah soo akhristo, sida safiinada iyo Caqiidada kana akhristo kutubta ahlusunnada kana barto qof caalim ah oo lagu kalsoon yahay.
Marka walaalka su'aashan ina waydiiyay waxaan kula talin lahaa in uu akhriyo ama dhegaysto duruusta webkan ku jirta oo qofkii billow ah wax badan ka baran karo, marka aad intaa dhegaysato oo aad akhrisato qoraallada halkan ku jira ayaad inshaa allaahu u gudbaysaa kutubta carabiga ku qoran oo aad baranaysaa wixii Ilaahay kuu qadero.
Ilaahay towfiiqada ha ku waafajiyo.
- Monday, January 30, 2006 at 18:07:58 (CST)
Su'aal: Qof Nabiga nnk difaacaya gaal ma noqon karaa?
Sheekh hirsi, Sidey isu gashaa wahaabiyo waa gaalo hadana ey difaacaan rasuulka (csw)?
Chango Omar <Chango Omar>
- Monday, January 30, 2006 at 17:46:06 (CST)